Chassis switch switch abavelisi kunye nababoneleli - China isisu sokutshintsha utshintsho kumzi mveliso
I-DCRS-9800 yoLuhlu lweLitye leCandelo loLuhlu lokuTshintsha ukuTshintsha
I-DCN DCRS-9816 kukusebenza kwesantya esiphezulu kwewassis switch. I-DCRS-9816 ine-18 slots, kubandakanya iindawo zokulawula ezi-2 kunye neendawo ezili-16 zeshishini. Ngonikezelo lwamandla olungafunekiyo, abalandeli kunye neemodyuli zolawulo, iDCRS-9816 iqinisekisa ukusebenza okuqhubekayo kunye nenkqubo engafunekiyo ngokupheleleyo. Uthotho lweDCRS-9800 lukhonza kwikhampasi kunye nedatha yeziko ledatha yokunxibelelana kwindawo zeshishini, ezentengiso kunye neenkonzo zokubonelela ngenkonzo. Iimpawu zeMveliso yokuSebenza kunye nokuSasazeka kweDCRS-9816 ixhasa ukuya kuthi ga kuma-320 * 10G amazibuko okanye ...
I-DCRS-7600E yeeNdawo eziSisiseko zoMbane eziTshintsha ukuTshintsha
I-DCRS-7600E uthotho lwentsebenzo yesantya esiphezulu ye-chassis switch, equlathe iimodeli ezimbini. 1 DCRS-7604E ziindawo ezi-4 zokutshintsha kweChassis. Ixhasa amazibuko e-Ethernet kwiibhloko zolawulo, eziqinisekisa ubuninzi beempawu ezixineneyo ze-2 DCRS-7608E ine-10 slots. Inendawo zokulawula ezi-2 kunye neendawo ezisibhozo zeshishini. Umsebenzisi unokumilisela iincakuba zeshishini ngokweemfuno ezichaziweyo. Ngonikezelo lwamandla olungafunekiyo, abalandeli kunye neemodyuli zolawulo, i-DCN DCRS-7600E Series iqinisekisa ukusebenza okuqhubekayo kunye nokungafuneki ngokupheleleyo ...
CS16800 Series Cloud Stone Core Layer yomzila Tshintsha
I-DCN CS16809 sisiseko sokutshintsha kwe-chassis eyenzelwe ukuhlangabezana neemfuno zenethiwekhi ebaluleke kakhulu ekusebenzeni okuphezulu, ukubakho okungafaniyo kunye nokusilela okubalaseleyo. I-CS16809 isebenza kwikhampasi kunye nedatha yeziko yokunxibelelana neemfuno, ixhasa ukuthunyelwa komgaqo-nkqubo wenethiwekhi, kwaye yakha ishishini elichaziweyo elungiselelwe inethiwekhi kubasebenzisi Iimpawu kunye nokuqaqambisa i-CLOS engathinteli uyilo lwe-CS16809 isebenzisa i-CLOS yeenqwelomoya ezininzi, izigaba ezininzi zokutshintsha izakhiwo, ezifikelela c ...